Xeerarka Anshaxa - Sichuan Aixiang Technology Co., ltd.
Shaqada iyo Goobta Shaqada
Fursada Loo Siman Yahay/Takoor La'aanta
Waxaan aaminsanahay in dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha shaqada ay tahay in lagu saleeyo kartida shaqsi ee qabashada shaqada ee aysan ku saleysnayn sifooyinka shaqsiyeed ama caqiidooyinka. Waxaan siinnaa shaqaalaha jawi shaqo oo xor ka ah takoorid, handadaad, handadaad ama qasab oo si toos ah ama si dadban ula xiriira jinsiyadda, diinta, nooca galmada, fikradda siyaasadeed ama naafanimo.
Uma adeegsano xabsi, addoon, caymis, ama shaqo qasab ah soo saarista alaabtayada.
Uma isticmaalno shaqaaleynta carruurta soo saarista badeecad kasta. Ma shaqaaleysiino qof ka yar 18 sano, ama da'da uu dhammaaday waxbarashada khasabka ah, hadba kii weyn.
Waxaan ilaalinaa saacadaha shaqada ee macquulka ah ee shaqaalaha iyadoo lagu saleynayo xadka saacadaha caadiga ah iyo kuwa dheeraadka ah ee sharciga deegaanku oggol yahay, ama meesha sharciga maxalligu uusan xaddidin saacadaha shaqada, usbuuca shaqada caadiga ah. Waqti -dhaafka, marka loo baahdo, waxaa si buuxda loo magdhabaa si waafaqsan sharciga maxalliga ah, ama ugu yaraan u dhigma heerka magdhawga saacadlaha ah ee caadiga ah haddii aysan jirin qaddar cayiman oo sharci ahaan loo qoray. Shaqaalaha waxaa loo oggol yahay maalmo macquul ah (ugu yaraan hal maalin oo fasax ah toddobadii maalmoodba mar) waxayna ka tagaan mudnaanta.
Qasab iyo Dhibaateyn
Waxaan qiraynaa qiimaha shaqaalahayaga waxaanna ula dhaqmaynaa shaqaale kasta si sharaf iyo ixtiraam leh. Ma isticmaalno habdhaqan edbin ah oo naxariisdarro ah oo aan caadi ahayn sida hanjabaadaha rabshadaha ama qaabab kale oo jirdil, galmo, nafsad ahaan ama kadeed ah ama xadgudub.
Waxaan si cadaalad ah magdhaw ugu siineynaa shaqaalaheena annagoo u hoggaansameyna dhammaan sharciyada quseeya, oo ay ku jiraan sharciyada mushaharka ugu yar, ama mushaharka warshadaha maxalliga ah, hadba kii sarreeya.
Waxaan ilaalinaa jawi nabdoon, nadiif ah oo caafimaad qaba anagoo u hoggaansanna dhammaan sharciyada iyo xeerarka khuseeya. Waxaan bixinnaa tas-hiilaad caafimaad oo ku filan, musqulo nadiif ah, si macquul ah loo heli karo biyo la cabi karo, goobo shaqo oo si fiican u iftiimaya oo hawo leh, iyo ka-hortagga walxaha halista ah ama xaaladaha. Isla heerarka caafimaadka iyo badbaadada ayaa lagu dabaqaa guri kasta oo aan siino shaqaalahayaga.
Waxaan aaminsanahay inay tahay waajibkayaga inaan ilaalino deegaanka taasna waxaan ku samaynaa annagoo u hoggaansanna dhammaan xeerarka iyo xeerarka deegaanka ee khuseeya.
Dhaqanka Ganacsiga Anshaxa
Macaamil Xasaasi ah
Waa siyaasaddeena inaan ka mamnuucno shaqaalaha inay galaan macaamil xasaasi ah - macaamilka ganacsiga guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid sharci darro ah, anshax -darro ah, anshax -darro ah ama in si xun looga fiirsado daacadnimada Shirkadda. Xawaaladahaani waxay inta badan ku yimaadaan qaab laaluush, dib -u -celin, hadiyado qiimo weyn leh ama lacag -bixinno la sameeyay si ay saameyn ugu yeeshaan go'aannada qaarkood ee saameeya ganacsiga shirkadda ama dan shaqsiyeed shaqsiyeed.
Waxaan ka mamnuuceynaa shaqaalaha inay helaan, si toos ah ama si dadban, wax kasta oo qiimo leh beddelkeeda isticmaalka ama oggolaanshaha inuu u isticmaalo booskiisa ama keeda faa'iidada qofkaas kale. Sidoo kale, laaluushyada ganacsiga, dib -u -celinta, gunnooyinka iyo gunnooyinka kale ee la siiyo macaamil kasta waa mamnuuc. Si kastaba ha noqotee, tan kuma jirto kharashyada qaddar macquul ah ee cuntada iyo madadaalada macaamiisha haddii ay si kale xalaal u yihiin, waana in lagu daraa warbixinnada kharashaadka oo lagu ansixiyaa habraaca Shirkadda caadiga ah.
Xakamaynta Xisaabaadka, Habraacyada iyo Diiwaanada
Waxaan si sax ah u haynaa buugaagta iyo diiwaanada dhammaan macaamil -macaamilka iyo qaab -dhismeedka hantidayada sida uu sharcigu farayo, sidoo kale waxaan ilaalinaa nidaamka kontaroolada xisaabaadka gudaha si loo hubiyo isku -halaynta iyo ku filnaanshaha buugaagta iyo diiwaanadayada. Waxaan hubinnaa in macaamil kaliya oo leh oggolaansho maamul oo habboon lagu xisaabiyo buugaagta iyo diiwaanadayada.
Isticmaalka iyo Bixinta Macluumaadka Gudaha
Waxaan si adag u mamnuuceynaa in la siidaayo macluumaadka gudaha ku jira dadka ku jira shirkadda kuwaas oo jagooyinkoodu diidaan helitaanka macluumaadkaas. Macluumaadka gudaha waa xog kasta oo aan si cad loo shaacin.
Macluumaad Qarsoodi ah ama Lahaansho
Waxaan ka taxadarnaa si aan u ilaalino kalsoonida iyo kalsoonida macaamiisheena. Markaa, waxaan ka mamnuucnaa shaqaalaha inay siidaayaan xogta qarsoodiga ah ama lahaanshaha ee ka baxsan Shirkadda oo waxyeello u geysan karta macaamiisheena, ama Shirkadda lafteeda. Macluumaadka noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa in lala wadaago shaqaalaha kale marka loo eego baahida loo qabo in la ogaado.
Waxaan u qaabeynay siyaasadeena inaan meesha ka saarno khilaafaadka u dhexeeya danaha shaqaalaha iyo Shirkadda. Maaddaama ay adag tahay in la qeexo waxa ka dhasha iska horimaadka danta, shaqaaluhu waa inay u nugul yihiin xaaladaha keeni kara su’aalo laga yaabo inay dhacaan ama isku dhacyo muuqda oo u dhexeeya danaha shaqsiyeed iyo danaha Shirkadda. Isticmaalka shaqsiyeed ee hantida Shirkadda ama helitaanka adeegyada Shirkadda ee macaashka shaqsiyeed ayaa laga yaabaa inay noqoto isku dhac dan leh.
Khayaanada iyo Cilladaha La midka ah
Waxaan si adag u mamnuuceynaa wax kasta oo khiyaano ah oo dhaawici kara macaamiisheena iyo alaab -qeybiyeyaasha, iyo sidoo kale Shirkadda. Waxaan raacnaa habraacyo gaar ah oo khuseeya aqoonsiga, ka warbixinta iyo baaritaanka waxqabad kasta oo noocaas ah.
Kormeerka iyo Ku -dhaqanka
Waxaan qaadaneynaa barnaamijka dabagalka dhinac saddexaad si aan u xaqiijino u hoggaansanaanta Shirkadda ee Xeerkan Anshaxa. Hawlaha dabagalka waxaa ka mid noqon kara kormeer warshad goobta ah oo la shaaciyey oo aan la shaacin, dib u eegista buugaagta iyo diiwaanada la xiriira arrimaha shaqada, iyo wareysiyo shaqsiyeed oo lala yeesho shaqaalaha.
Kormeerka iyo Diiwaangelinta
Waxaan u xilsaarnaa hal ama in ka badan oo ka mid ah saraakiisheena si ay u baaraan una xaqiijiyaan in la dhawray Xeerka Anshaxa ee shirkadda. Diiwaanada shahaadadani waa mid ay heli karaan shaqaalaheena, wakiilladeena, ama dhinac saddexaad marka la codsado.
Waxaan si adag u raacnaa oo u ixtiraamnaa dhammaan xuquuqda Hantida Wax -garadka inta lagu guda jiro socodsiinta ganacsigeena ee suuqyada caalamka iyo kuwa gudaha labadaba.